မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ ပထမဆုရှင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲ လောင်းကြေးထပ်ထားတဲ့ ရဲနောင်နဲ့ပိုးမီ – Askstyle
လတ်တလော ပရိသတ်စိတ်ဝင်စား၊အားပေးမှုအမြင့်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါကတော့ သုံးပတ်မြောက်သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှု ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအပတ်စဉ်နှစ်ခုအပြီးမှာ ဆန်ကာတင်(၁၁)ယောက်စာရင်းထဲက တစ်ယောက်ကတော့ နူတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီး ဒီအပတ်“တက္ကသိုလ်အမှတ်တရ” သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုမှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ယောက်က နူတ်ဆက်ထွက်ခွာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေက ထွက်ခွာသွားရမယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အတူ ဘယ်သူကပြိုင်ပွဲရဲ့ ပထမဆုရှင်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုလည်း ထင်ကြေးပေးခန့်မှန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲရဲ့ Season သုံးခုလုံးမှာ ပထမဆုရှင်က ယောကျ်ားလေးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးအဆိုရှင်တွေများစွာ ပါဝင်လာတာကြောင့် ပထမဆုရှင်ကို မိန်းကလေးရလောက်တယ်လို့လည်း ထင်ကြေးပေးခန့်မှန်းမှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းကြသူတွေထဲမှာတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရဲနောင်နဲ့ပိုးမီတို့လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲနောင်က ယောကျ်ားလေးဘက်က အားပေးတာဖြစ်ပြီး ပိုးမီကတော့ မိန်းကလေးဘက်ကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို “ဒီနှစ် winner Boy or girl ….! ရဲနောင်နဲ့ ဆယ်သိန်းကြေး လောင်းထားတယ်…ကိုယ်က မိန်းခလေးဖက်က… ရဲနောင်က ယောကျာ်းလေးဖက်က…ပွဲပြီးမှ မရှော်ကြေးနော်…ဟွင်းးးး ဟွင်းးးးး” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ပထမဆုရှင်က ဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်သလဲ ဖြေပေးခဲ့ပါဦးနော်။
လတ္တေလာ ပရိသတ္စိတ္ဝင္စား၊အားေပးမႈအျမင့္ဆုံးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါကေတာ့ သုံးပတ္ေျမာက္သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲအပတ္စဥ္ႏွစ္ခုအၿပီးမွာ ဆန္ကာတင္(၁၁)ေယာက္စာရင္းထဲက တစ္ေယာက္ကေတာ့ ႏူတ္ဆက္ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီအပတ္“တကၠသိုလ္အမွတ္တရ” သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ႏွစ္ေယာက္က ႏူတ္ဆက္ထြက္ခြာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြက ထြက္ခြာသြားရမယ့္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြကို စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔အတူ ဘယ္သူကၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပထမဆုရွင္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကိုလည္း ထင္ေၾကးေပးခန္႔မွန္းေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအိုင္ေဒါၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ Season သုံးခုလုံးမွာ ပထမဆုရွင္က ေယာက်္ားေလးျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြကိုစိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အဝေပးႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးအဆိုရွင္ေတြမ်ားစြာ ပါဝင္လာတာေၾကာင့္ ပထမဆုရွင္ကို မိန္းကေလးရေလာက္တယ္လို႔လည္း ထင္ေၾကးေပးခန္႔မွန္းမႈေတြရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္။
ခန္႔မွန္းၾကသူေတြထဲမွာေတာ့ ျမန္မာအိုင္ေဒါရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ရဲေနာင္နဲ႔ပိုးမီတို႔လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေနာင္က ေယာက်္ားေလးဘက္က အားေပးတာျဖစ္ၿပီး ပိုးမီကေတာ့ မိန္းကေလးဘက္ကျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို “ဒီႏွစ္ winner Boy or girl ….! ရဲေနာင္နဲ႔ ဆယ္သိန္းေၾကး ေလာင္းထားတယ္…ကိုယ္က မိန္းခေလးဖက္က… ရဲေနာင္က ေယာက်ာ္းေလးဖက္က…ပြဲၿပီးမွ မေရွာ္ေၾကးေနာ္…ဟြင္းးးး ဟြင္းးးးး” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ေဖ့ဘြတ္ခ္မွာ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရာ ပထမဆုရွင္က ဘယ္သူျဖစ္မယ္ထင္သလဲ ေျဖေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။